သားသားမီးမီးလေးတွေကို ညညနို့ထတိုက်ရလို့ အိပ်ရေးပျက်တဲ့ မေမေတို့အတွက် | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ညဘက်မှာ ကလေး နို့ထတိုက်ရလို့ အိပ်ရေး အရမ်းပျက်တဲ့ မေမေတွေအနေနဲ့ ကလေးလေး တစ်ညလုံး အိပ်စေဖို့ကို စိတ်ကူးယဉ် မျှော်လင့်ကြမှာပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ dream feed အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ Dream feed ဆိုတာက ကလေးအိပ်နေရင်းသား နို့တိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ ညဘက် ၁၀ နာရီ၊ ၁၁ နာရီလောက်မှာ တိုက်ထားပြီးတော့ မနက်အထိ ကလေး ဗိုက်ပြည့်ပြီးတော့ တစ်ညလုံး ကောင်းကောင်းအိပ်ဖို့ပါ။
>> Dream feed က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?
ကိုယ့်ကလေးကို dream feed လုပ်မယ်ဆိုရင် ကလေး ပုံမှန်အိပ်ချိန်မှာပဲ သိပ်ထားပါ။ ပြီးတော့ ည ၁၀-၁၁ နာရီလောက်ရောက်ရင် ကလေးကို သူ့ပုခက်ထဲက အသာလေး မယူလိုက်ပြီးတော့ ကလေးမနိုးစေဘဲနဲ့ နို့နဲ့တေ့ပေး (သို့) နို့ဘူးပေးပါ။ ကလေးတွေက နို့သီးခေါင်းနဲ့ ထိလိုက်ပြီဆိုရင် အိပ်နေရင်းလည်း နို့စို့တတ်ပါတယ်။ ကလေးကို မနိုးစေဘဲနဲ့ နို့တိုက်ရာမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကတော့ သူ့ကို လှုံ့ဆော်မှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းစေဖို့ပါပဲ။ မီးမဖွင့်ပါနဲ့၊ သီချင်းဆိုတာ၊ မလိုအပ်ဘဲ သေးခံလဲပေးတာမျိုးတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ နို့တိုက်ပြီးပြီဆိုရင် ပုခက်ထဲကို အသာလေးပြန်ချထားပြီး အနားကနေ ဖွဖွလေးထွက်ပါ။
ဒီနည်းက ကလေးတိုင်းအတွက်တော့လည်း အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ တချို့ကလေးတွေက ၁၀-၁၁ နာရီလောက်မှာ တိုက်ပြီးရင် ဗိုက်ဝပြီးတော့ တစ်ညလုံးအိပ်ပေမယ့်လည်း တချို့ကျတော့ နို့တိုက်နေတုန်းမှာ နိုးသွားပြီးတော့ ပြန်သိပ်ရခက်တတ်ပါတယ်။ တချို့ကျတော့ နို့တိုက်နေတုန်းမှာတော့ မနိုးပေမယ့်လည်း တစ်ညလုံး ပြန်မအိပ်တာမျိုး ဖြစ်တတ်သလို တချို့ကလေးတွေက မနက် ၃-၄ နာရီလောက်မှာ ပြန်နိုးလာတတ်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ရည်ရွယ်ချက် မအောင်မြင်ဘူးပေါ့။
Dream feed နည်းက မိဘအားလုံးနဲ့လည်း အဆင်ပြေချင်မှပြေမှာပါ။ တချို့အမေတွေက ၈-၉ နာရီလောက်ဆိုရင် အိပ်ရာဝင်ပြီးတော့ ကလေး တရေးပြန်နိုးလာတဲ့အထိ အိပ်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် dream feed ပေးဖို့အတွက် အဖေ (သို့) ကလေးထိန်းတစ်ယောက်ယောက်က ညှစ်ထားတဲ့ အမေနို့ (သို့) နို့ဘူးကို ကလေးကို ည ၁၀-၁၁ နာရီလောက်မှာ တိုက်ပေးပြီးတော့ အမေကို ပေးအိပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
>> Dream feed ကို ဘယ်အချိန်မှာ စပေးနိုင်သလဲ?
ကလေး ဘယ်အရွယ်ကမဆို စပြီးတော့ ကိုယ်ဆန္ဒရှိတဲ့အထိ (သို့) ဒီနည်းနဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေသေးတဲ့အထိ ပေးလို့ရပါတယ်။ ကလေး အသက် ၈ လလောက် ရောက်ပြီဆိုရင် ညဘက် နို့ထစို့စရာမလိုဘဲ ကလေးက တစ်ညလုံး အိပ်တတ်ပြီဖြစ်လို့ ဒီအချိန်ဆိုရင်တော့ dream feed ကို ရပ်လိုက်လို့ရပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ဝမ်းဗိုက်က တစ်ညလုံး အဆာခံတဲ့အထိ နို့တွေကို ဖြည့်ထားဖို့အတွက် လုံလောက်အောင် ကြီးလာပါပြီ။